Al-Shabaab ayaa sheegtay in diyaarad Drone oo Mareykanka uu lee yahay ay kusoo dhacday Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya.
Waaxdxa Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa beenisay sheegashada Al-Shabaab ee ah in diyaarad aan duuliye lahayn oo ay tuhunsan yihiin in Mareykanka uu lee yahay ay kusoo dhacday Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya.
Website-yada taageera kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay in diyaarad drone ah oo sidday lix gantaal ay ku dhacday deegaanka Shandacar oo 70 km u jira degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
Al-Shabaab waxa kale oo ay sheegeen in diyaaradda ay u qaateen goob ay ayaga maamulaan.
Email uu usoo diray VOA, ayaa afhayeen u hadlay Pentagon-ka waxa uu sheegay in dhammaan diyaaradaha saldhigga Mareykanka ee AFRICOM la tiriyey, oo aysan jirin wax tilmaamaya in diyaaradda Al-Shabaab ay sheegeyso ay tahay mid Mareykanka uu lee yaay.
Sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya oo magaciisa qariyey ayaa sheegay inay maqleen akhbaarta diyaaradda soo dhacday, balse aysan xaqiijin karin cidda iska leh.
Illaa iyo hadda ma jirto cid si madax banaan u xaqiijin karta sheegashada Al-Shabaab, hase yeeshee diyaardaaha dagalaka Mareykanka ayaa weeraro ka dhan ah madaxda Al-Shabaab ka fuliyey Koonfurta Soomaaliya, sanadihii dhowaa
Baarlamanka Somalia Oo Dib U Eegaya Dastuurka